WAXAAN U DHISEYNAA AASAASKA AQALKA DHIRTA LAGU KORIYO LEH GACMAHEENA: LAGA BILAABO QORYAHA, DHAGXAANTA, BARTA, CAJALADDA, ON QASHIN-QAADID - DHISMAYAASHA
Bannaanka u badan, go'aansado in la dhiso aqalka dhirta lagu koriyo ee goobta, ha ka fikirin saldhigaa lagu kalsoonaan karo. Dabcan, aqalka dhirta lagu koriyo ma aha qaab dhisme oo culus ee carrada ka soo yar yar.
Sidaa darteed, dad badani waxay aaminsan yihiin in aasaaska lagu kalsoon yahay loo baahan yahay oo keliya dhismayaasha beeraha ee caasimadda, iyo qorrax madow oo caadi ah ayaa si toos ah loogu dhigi karaa dhulka.
Xalka noocan oo kale, waxyaabo kale, wuxuu ka dhigayaa mobile-ga mobile-ka wuxuuna kuu oggol yahay inaad u guurto meel kasta oo haboon. Si kastaba ha noqotee, inta badan, aasaaska, xitaa qaab dhismeedka iftiinka, waa lagama maarmaan, maxaa yeelay waxay fulisaa tiro shaqooyin muhiim ah.
Waa maxay aasaaska aqalka dhirta lagu koriyo?
Sida loogu talagalay aqalka dhirta lagu koriyo, oo loo dhiso gacanta, iyo aasaaska warshadaha ayaa siin doona xasiloonida iyo adkeysiga dhismaha oo dhan. Ku rakibidda aqalka dhirta lagu koriyo waa in lagu daryeelo xaaladaha soo socda:
Goorma qaabka aqalka dhirta lagu koriyooo leh dabayl xoog leh, waa in si sugan loo sugaasi looga hortago xannibaadda;
Marka kulaylku leeyahay weyn iyo miisaansi looga hortago isbeddelka sababtoo ah hoos u dhaca ciidda;
Marka aqalka dhirta lagu dhejiyo shaqeyn sanadka oo dhan oo wuxuu ku dhejiyaa dhismaha guriga;
Marka aasaaska loo malaynayo in la xoojiyo hoosta barafka iyo sidaas awgeed badbaadinta kuleylkaiyada oo qolka kuleylka diirimaad ah;
Marka milkiiluhu doonayo sii dheer nolosha shaqada qaababka, isaga oo ka soocaya saameynaha waxyeelada dibadda ee qoyaanka iyo ciidda, tusaale ahaan, si looga hortago in lakabiyo qaabka alwaaxda;
Marka aasaasku noqdo caqabad si ay u dhex galaan qulqulka hawo qabow oo u dhow dhulka iyo qulqulka;
Marka ay jirto baahi ilaalinta dhirta laga bilaabo jiirka iyo cayayaanka waxyeellada leh;
Marka goobta qalabka rakibida si aan rasmi ahayn loo ilaaliyo loona xaqiijiyo si sugan ka badbaadi waxyeelada kufsi.
Noocyada aasaasiga ah iyo talooyinka lagu dooranayo xalalka saxda ah
Saldhigga loogu talagalay aqalka dhirta lagu koriyo waa in lagu xushaa iyada oo ku saleysan qaababka naqshadeynta, ciidda goobta rakibidda. Iyo sidoo kale iyada oo ku saleysan suurtagalnimada in la iibsado kuwa ama qalabka kale ee dhismaha. Khibradda dhismaha ee dhismaha ee milkiilaha goobta ayaa sidoo kale muhiim ah.
Dad badan ayaa ka welwelsan su'aasha ah in ay suurtagal tahay in aasaas loo sameeyo aqalka dhirta lagu koriyo ee gacmahaaga. Haa, milkiiluhu wuxuu dhisi karaa aasaas fudud oo leh xirfado yar. Tusaale ahaan, sidaasi waa aasaaska aqalka dhirta xarkaha xumbada.
Saldhig culus waa dhismaha ugu fudud. Dhab ahaan, waa taageero lagu dhisayo aqalka dhirta lagu koriyo, taas oo u oggolaanaysa in qaabka gogolka ah loo dhigo, iyada oo aan loo baahnayn, iyo sidoo kale ilaa xad ka difaaco saameynta qoyaanka dhulka.
Taageero dhibcood ayaa laga sameyn karaa wax kasta oo la heli karo, sida alwaaxyada, lebiska, xayawaanka ama xayawaanka xayawaanka.
Qodobka sare ee dhismaha, ayaa sii xoogeysanaya qalabka taageerada ah.
Noocaan noocan ah waxaa loo isticmaali karaa marka lagu rakibo koronto-ku-hayn ku meel gaar ah, hawlgal dheer oo aan la bixin.
Tusaale ahaan, markaad beerto geedo dhul furan.
Saldhig u ah aqalka dhirta lagu koriyo ee barafka waa qaab aad u adag. Waxaa lagu sameeyaa qaab shaxan ah oo ka sameysan waxyaabo ku habboon qaybta iskutallaabta.
Naqshadahan waxaa si toos ah loogu dhigi karaa dhulka oo ku soo galaya ciidda.
Waa sahlan tahay in lagu soo lifaaqo qaabka wax lagu koriyo si loo aaso saldhigga alwaax.
Saldhigga kuleylka laftiisa loogu talagalay kalsoonida waxaa badanaa lagu dhejiyaa xarumaha qoday dhulka hoose ee geesaha dhismaha.
Xalka noocan oo kale ah wuxuu u fiicnaan doonaa rakibidda aqalka dhirta lagu koriyo oo leh muraayad iftiin leh oo daboolaya shey hal xilli ah marka milkiilaha goobta uu rabo inuu bedelo goobta goobta dhismaha si loo gaaro waxtarka ugu weyn ee beeraha.
Guryaha aqalka dhirta lagu dhejiyo waxaa si sahlan loogu dhaqaaqi karaa dadaal yar.
Caawimaad: Qalabka ugu caansan ee shaxan alwaax waa barar alwaax ah oo leh qayb ka mid ah 12x12 cm, si kastaba ha ahaatee, suuqaas oo kale ayaa laga soo ururin karaa alwaax kasta. Bannaanka loo isticmaalo ee loogu talagalay in lagu rakibo kuraasta qaybaha kala duwan, laakiin aan ka yarayn 5 cm qaro weyn, iyo sidoo kale log oo dhexroor yar. Si kastaba ha noqotee, alwaax kasta oo ka hortagaya dhiiqada waa in lagu daaweeyaa cirridka ganacsiga ee la heli karo iyo antiseptics.
Si loogu rakibo beeraha joogtada ah oo leh tiro ballaaran sababtoo ah isticmaalka qaab dhismeed dabacsan iyo qalabka laysku qurxiyo, loogu talagalay isticmaalka muddada dheer, waxaa lagula talinayaa in la dhiso meelo badan oo lagu kalsoonaan karo saldhig strip.
Noocani waa aasaas qarxan dhulka, walxaha laga yaabo inay noqdaan kuwo la taaban karo iyo xumbo isku xiran oo isku xiran, midab kale.
Badanaa waxa loo isticmaalaa saldhig dabaysha, oo lagu sameeyo mashiinka la isku qurxiyo ee qaabka loo adeegsado xoojinta.
Noocaan wuxuu noqon doonaa aasaaska lagu kalsoonaan karo oo loogu talagalay aqalka dhirta lagu koriyo leh, waxuuna sii dheeraan doonaa, wuxuu ku siin doonaa biyo-kulul meelaha meelaha biyaha hoose ku yaala u dhow dusha ciidda.
Caawimaad: Xaaladda marka la taaban karo oo la isticmaalo saldhigga saldhigga, xajmiga aqalka dhirta lagu koriyo waxaa lagu dhufan doonaa xajmiga buundooyinka kuwaas oo laga dheehan karo dhumucda dusha. Xaqiiqdu waxay tahay in jumladaha la taaban karo ee ay sameeyaan habka wax lagu tuurayo ay yihiin wax qallafsan oo aan lagu talineynin inay kala qaybiyaan. Markaad isticmaasho xayawaanka xayawaanka ah ee aasaasiga ah, saldhigyada iyaga ku jira waxaa ka buuxa hoobiye sibidhka. Tijaabinta waxaa lagu daaweeyaa qalabka hydrophobic. Xaaladaha qaarkood, qulqulka tareenada ayaa loo isticmaalaa sida maaddada asaasiga ah, kuwaas oo horeyba u haysta maqaar aan horay loo arag ka horjoogsanaya inay ka soo baxaan.
Saldhigga Monolithic Marar dhif ah ayaa loo isticmaalaa oo loo adeegsadaa xaaladaha halka lagu koriyo lagu dhisi doono carrada daciifka ah waxaana jira baahi loo qabo in lagu kalsoonaan karo dhismaha carrada.
Xaaladdan oo kale, ka dib markaad calaamadeyso dhulka, godadka ayaa qodaya.
Qeybta hoose ee godadka, suufka ciidda iyo quraarada ayaa lagu shubay. Taas ka dib, qaab dhismeedkiisu waa dhisme xoojin, ka dibna waxaa lagu shubi karaa wax la taaban karo.
Xaaladdan oo kale, naqshadeynta waxaa lagama maarmaan ah inay bixiso dheecaan. On a saldhig monolithic, waxaad ku rakibi kartaa aqalka dhirta lagu koriyo of kasta oo design ah.
Xalka kale waa in la isticmaalo aasaasida tuubbada shaashadda. Wixii koriyo ah, aasaas adag ayaa loo isticmaali karaa marka jiirada aagga aan la qiyaasi karin.
Waa suurtogal in la isticmaalo doorashadan iyo carrada aadka u qoyan.
Gawaarida xakameysa waa tuubooyin bir ah oo la gooyay. Waxaa lagu dhejiyaa dhulka iyada oo aan la isticmaalin tiknoolaji kasta.
Kadib markaad isku dhejisid, dushooda dushooda waxaa la jarjarey heerkana kadibna xajmiga ayaa ku xiran.
Noocyada kale ee aasaasiga ah ee lagu koriyo, oo ay ku jiraan aasaaska aqalka dhirta lagu koriyo laga soocayo, ka akhriso halkan.
Fiiri hoosta: sawirka aasaasiga ah ee lagu koriyo, aqalka dhirta lagu koriyo oo gacmahooda ku leh aasaaska
Waxaan ku dhisnaa aasaaska cajaladaha leh gacmaheena
Sababtoo ah xaqiiqda ah in dhismaha aasaaska iyo saldhigga qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka alwaaxku aanu soo bandhigin wax badan oo adag, iyo sidoo kale in lagu rakibo aqalka dhirta lagu koriyo, iyo saldhigyada qaabka monolith ama tuubbada caarada dhismaha lagu koriyo si dhif ah loo isticmaalo, tixgelin habka dhismaha oo lagu koriyo dharbaaxin iyadoo la adeegsanayo muraayad lagu shubo shaqo-qorid:
Marxaladda koowaad, waa inaad diyaarisaa goobta dhismaha.:
Dhirta on goobta site aqalka dhirta lagu koriyo waa la saaraa, calaamadeynta huuriga mustaqbalka waxaa lagu sameeyey dhulka, qaabka waxaa lagu hubiyey by heer. Ka hor inta aanad bilaabin shaqada waxaa wanaagsan in la sameeyo jaantuska aasaasiga ah ee dhismaha.
Taas ka dib, godad ayaa lagu qodaa, qoto dheer oo la doorto iyadoo ku xiran miisaanka dhismaha, qoto dheer ee ciidda lagu keydiyo iyo biyaha dhulka.
Haddii goobta ku taal dhulka sarewaa in la dhisaa aasaas la aasowaxay udhacdaa qoto dheer 200-400 mm. ka hooseeya heerka khalkhalka ciidda, celcelis ahaan, tilmaamahan waa 1200-1400 mm. Haddii aysan jirin meel dhulka ka sarreeya, waxaa ku filan in la dhiso xarun qotodheer oo qotodheer oo udhiganta 700-800 mm oo qoto dheer oo qotoma.
Saamiga ugu badan ee la isticmaalay ee qoto dheer iyo dhererkiisu waa 700: 400 mm. Baaxadda aasaasiga ah waa in uu ka yar yahay dhererkiisa, halka balaarinta qaansada ay tahay inay noqoto laba jeer ballaaran ee aasaaska mustaqbalka suurtagalnimada samaynta qaabka qaabka.
Marxaladda labaad oo ku yaal godad, qalab saqaf ah ayaa la dhigaa laba lakab, oo ah godad ah 100-200 mm lakabyo ciid ah oo dhoobo ah ayaa lagu shubay. lakab kasta. Ka dib markaa qaabka qaabaynta ayaa lagu rakibay. Tani waxaa la isticmaali karaa qalab kala duwan oo loo isticmaali karo - kuraasta, qaybo ka mid ah alaabta qolka fadhiga, warqadaha biraha ama caag adag.
Fiilooyinka waxaa lagu dhejiyaa qaabka loo dhammeeyey. Foomka ugu fudud, laba rodol oo qoyan oo adag oo xoojin ah oo leh laf-dhabar dhinaca dhinac ah ayaa la dhigaa aan ka yarayn 500 mm. Dhoobaatooyin khafiif ah ayaa la isku maraa.
Kadibna, ulaha dhererka qotodheerta ayaa lagu riixaa dhulka, suunka sare wuxuu ku dhajiyaa si isku mid ah. Qalabaynta waxaa lagu xiraa silig jilicsan.
Marxaladda soo socota - ku shubidda isku darka shubka.
Isku darka wuxuu ka kooban yahay qayb ka mid ah 3 qaybood oo ciid ah ilaa 1 qaybood oo sibidh ah. Si aad u buuxiso lakabka hoose ee saldhigga, waxaad ku dari kartaa dhagax la jajabiyey ama jajabkii jajabkii ku duubnaa. Marka hore, isku dar qasac qallalan, ka dibna ku dar 4-5 qaybood oo biyo ah iyo xalka ayaa loo keenaa si joogta ah labeen dhanaan.
Isu diyaari ku shubay qaab dhismeedka oo lagu riixay in hawada laga saaro voids. Kiisaska ugu fudud, tan waxaa lagu samayn karaa ul. Haddii xalka diyaarinta uusan ku filneyn in la buuxiyo aasaaska oo dhan, waa in lagu shubo gudaha lakabyada.
Dhinaca wareegga, tubooyinka dhoobada toosan ayaa la geliyaa saldhigga, iyo qaabka goglan lagu dhajin doono iyaga. Ka dib qalajinta, aasaaska ayaa lagu daboolayaa maqaarka dhoobada leh ama lagu daboolay waraaqaha saqafka loogu talagalay biyuhu.
Markaa waa inaadan degdegin - qaabka dhameystirka ee xalka wuxuu ku dhici doonaa qiyaastii 4 asbuuc, ka hor inta aan foomka laga saari karin oo aasaaska aan la dhigi karin.
Daadinta balaastikada waa ugu fiicnaanta marka la eego shuruudaha kaydinta miisaaniyadda iyo fududayntu waa habka loo aaso aasaas loogu talagalay aqalka dhirta lagu koriyo. Noocida noocan ah waxay ku haboon tahay nooc kasta oo ah dhisme aqalka dhirta lagu koriyo, taas oo loo malaynayo in loo isticmaalo hawlgal joogto ah oo joogto ah.
Waxaan rajeyneynaa in aanu ka jawaabay su'aalaha ah ee bannaanka u dhow aqal: Waa maxay saldhigga ugu fiican ee lagu koriyo iyo sida loo aasaaso ee loogu talagalay aqalka dhirta lagu koriyo ah?